Lahatsoratra nosoratan'i Daniel Salikov
Daniel Salikov dia talen'ny Marketing ao amin'ny Hetsika rocket, masoivoho mpamorona hetsika mifantoka amin'ny famoronana lahatsary manazava sy ara-barotra ho an'ny fanombohana.
Talata, Novambra 30, 2021 Talata, Novambra 30, 2021 Daniel Salikov
Na fanombohana na fandraharahana antonony, ny mpandraharaha rehetra dia manantena ny hampiasa paikady ara-barotra nomerika hanitarana ny varotra. Ny marketing dizitaly dia ahitana ny fanatsarana ny milina fikarohana, ny marketing amin'ny media sosialy, ny marketing amin'ny mailaka, sns. Ny fahazoana mpanjifa mety sy ny fitsidihan'ny mpanjifa ambony indrindra isan'andro dia miankina amin'ny fomba fivarotanao ny vokatrao sy ny fomba fanaovana dokambarotra azy ireo. Ny fampahafantarana ny vokatrao dia mipetraka amin'ny sokajy dokam-barotra amin'ny media sosialy. Manao hetsika samihafa toy izany ianao